नेपाल लोक स्टार बिजेताले ५० लाख पाउने ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
नेपाल लोक स्टार बिजेताले ५० लाख पाउने !
पहिलो पटक शुरु भएको मौलिक सांगीतिक रियालिटी ‘शो’ ‘नेपाल लोक स्टार’ले आफूले प्रयोग गरेको सम्पूर्ण गीतसंगीतको रोयल्टी प्रदान गर्ने जनाएको छ । ‘शो’ प्रशारणका क्रममा अहिलेसम्म प्रशारण भएका र अब प्रशारण हुने गीतसंगीतका श्रष्टा तथा सर्जकलाई रोयल्टी प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
टेलिभिजन र युट्युब च्यानल दुबैमा प्रशारण भएको गीतसंगीतको रोयल्टी प्रदान गरिने आयोजक चहाना मिडियाका अध्यक्ष सहदेव कोइरालाले जानकारी दिए । “टेलिभिजनमा प्रशारण भएको संगीत तथा रोयल्टी संकलन समाजलाई दिन्छौं,” अध्यक्ष कोइरालाले भने, “युट्युबमा प्रयोग गरेवापत पनि हामी सर्जक तथा सम्बन्धीत संस्थालाई रोयल्टी प्रदान गर्ने छौं ।” कोइरालाले ‘नेपाल लोक स्टार’ले नेपालमा पहिलो पटक युट्युबमा अरुको गीतसंगीत प्रयोग गरेवापत रोयल्टी प्रदान गर्न लागेको दाबी गरे ।
“अहिलेसम्म कसैले पनि नेपालमा युट्युबमा अरुको गीत प्रयोग गर्दा रोयल्टी तिर्ने चलन छैन । तर, हामी यो परम्परालाई तोड्दै रोयल्टी प्रदान गर्दैछौं । यसले अरुलाई पनि झक्झक्याउने हाम्रो विश्वास छ,” उनले भने ।
अहिलेसम्म १० वटा श्रृंखला प्रशारण भएको ‘नेपाल लोक स्टार’ ३६ औं श्रृंखलासम्म प्रस्तुत हुने छ ।
विजेताले करसहित नगद ५० लाख रुपैयाँ पाउने छन् । आयोजकका अनुसार दोस्रो हुनेलाई २५ लाख ९करसहित० र तेस्रो हुनेलाई १० लाख रुपैयाँ ९करसहित० पुरस्कार प्रदान गरिने छ । यस्तै, प्रथम हुनेले २५ लाख, दोस्रो हुनेले २० लाख र तेस्रो हुनेले १५ लाख रुपैयाँको सिटिजन लाइफ इन्सोरन्स प्राप्त गर्नेछन् । उत्कृष्ट २५ प्रतिीपर्धीले जनही १० लाख रुपैयाँको सिटिजन लाइफ इन्सोरन्स प्राप्त गर्ने अध्यक्ष कोइरालाले जानकारी दिए ।